Alim-bavaka teny Soamandrakizay :: Nanentana ny tanora handray andraikitra ny Papa Fransoa • AoRaha
Alim-bavaka teny Soamandrakizay Nanentana ny tanora handray andraikitra ny Papa Fransoa
Tsy nahatohitra ny hafanam-pon’ny tanora ny rivotra sy ny vovoka ary ny hatsiaka teny Soamandrakizay, tamin’ny sabotsy alina. Manodidina ny iray hetsy ireo niari-tory nanao alim-bavaka.
Tehaka sy horakoraka tao anatin’ny dihy sy ny hira no nentin’izy ireo nandraisana ny Papa Fransoa, izay nanokana ora iray teo ho eo ho azy ireo. Nitondra hafatra mafonja ho an’ny tanora ny lehiben’ny Eglizy katôlika. Nifantoka tamin’ny fandraisana andraikitra sy ny firotsahana an-tsehatra ny famelabelarana. « Tsy tokony hiandry mahazo na hitaraina lava na hijery bika ianareo fa hiasa sy handray andraikitra », hoy izy.
Olana maro no sedrain’ny tanora amin’ny andavanandrom-piainany. Nanoro hevitra ny Papa Fransoa mba hahaizan’ny tanora mikaroka ny fahasambarana tsy azo kosehina. « Jereo ny maha olona fa aza mifantoka amin’ny fahadisoana na tsy fahafahana ianareo fa asan’ny maizina izay mangeja izany », hoy izy nanohy.
Nampirisika ny tanora izy hanaiky fa mpitondra fanantenana izy ireo. « Tsy hisy afaka milaza fa tsy ilaina aho », nasainy naverin’ireo tanora iray hetsy intelo izany mba hananan’izy ireo fahatokisan-tena. « Ny ilain’i Madagasikara dia ny tsy hahafaty ny afom-panantenana ho anareo sy ny namanareo », hoy ny Papa namarana
Lafiny fiarovana :: Nojerena ny fanomanana ny fandraisana ny Papa Fransoa eny Andohalo